Ingxamiseko evela kwi-Superstar "iVanilla Ice" kunye ne-Samsung: Ice, Baby! Ungasindisa njani umhlaba?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ukuphuthuma kwi-Superstar "Vanilla Ice" kunye ne-Samsung: Ice, Baby! Ungasindisa njani umhlaba?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • ukonwatyiswa • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuphuthuma kwi-Superstar "Vanilla Ice" kunye ne-Samsung: Ice, Baby! Ungasindisa njani umhlaba?
Amaqabane eVanilla Ice kunye ne-Samsung Electronics ukukhupha kwakhona i-Ice 'Ice, i-Ice Baby' engatshatanga njengo 'Nciphisa Ice yakho, Ice Ice'
I-90s yaseMelika i-rap superstar uVanilla Ice uzimanye ne-Samsung Electronics ukuphinda akhulule ingoma yakhe eyodwa 'Ice, Ice Baby' njenge 'Nciphisa Ice yakho, Ice Baby', ehambisa umyalezo onamandla "onomphelo ozinzileyo".
Ividiyo entsha kraca yomculo ikhuthaza rappa abalandeli ukuba benze utshintsho oluncinci ngomehluko omkhulu, becela umhlaba ukuba unyuse iqondo lobushushu beifriji zabo, ngenxa yoko wehlise umqondiso wekhabhoni yomntu ngamnye ukwenza ifuthe lomdibaniso kunye nokudibana.
Idatha entsha ekhutshwe ivela kwi-Samsung ibonisa ukuba ukuba yonke imizi eYurophu inyuse ubushushu befriji nge-1 degree Celsius1, inani eliqikelelweyo ngaphezulu kwe-1 yezigidi zeetoni zokukhutshwa kwe-CO2 kungagcinwa ngonyaka 2.
Oku kulingana nokukhutshwa kwe-CO2 kukhutshwa kwizithuthi ezingaphezulu kwama-217,000 eziqhutywa unyaka wonke, ngaphezulu kwe-2.5 yeebhiliyoni zeekhilomitha ezivalelwe ngesithuthi sabakhweli esiqhelekileyo okanye ukusetyenziswa kwamandla unyaka ngaphezulu kwamakhaya ayi-120,000 edityaniswe 3.
Isamsung ibhiyozela ukumiliselwa kwayo Uluhlu lwefriji yeBespoke njengoko kubonisiwe ukujija kwividiyo yomculo esandula ukukhutshwa. Uluhlu luza kukhetho lwe-14 kwi-trend colourways e-UK, ukusuka kwii-pastels eziqaqambileyo ukuya kwi-monochromes ezi-sleek, kunye noluhlu lokugqitywa okunje ngeGlam, iSatin, i-Stainless kunye neCotta.
UVanilla Ice uthe: “Ndiyakuthanda ukuphila ubomi obuzinzileyo kwaye ukusebenzisa umbane kakuhle yinxalenye yako. Ndihlala ndikhangela ezona zoyilo zinqabileyo ekhayeni lam, kwaye ndiyithanda kakhulu indlela elungelelaniswe ngayo umgca weBespoke. Ndonwabile kakhulu ukusebenza neSamsung kule projekthi njengoko umculo uyindlela entle yokudibanisa abantu nokusasaza eli bali lendalo. Ndiyathemba ukuba umyalezo wamkelwe ngokuvakalayo nangokucacileyo, kwaye sonke singenza konke okusemandleni ukukhathalela umhlaba wethu. ”
UTim Beere, uMphathi oMkhulu woPholiso kwaSamsung eYurophu uthe: “Siyavuya ukubambisana noVanilla Ice kule projekthi ukusasaza umyalezo ozinzileyo obaluleke kakhulu kuthi. Uluhlu lwethu lwe-Bespoke lweefriji zemodyuli luyilelwe ngozinzo kunye nokuthembeka engqondweni, ukubonelela ngesixhobo esinokuhlala ngaphezulu kwefashoni, sihamba nabaniniminyaka kangangeemfuno zabo ezihlala zitshintsha, ukuthanda izinto, ukutya ukutya, kunye nezinto zokuphucula ubomi bosapho. Ezi ngcibi zisebenza kakuhle ziyilelwe ngabantu, ziyabhetyebhetye xa zisebenza, kwaye zihlala ixesha elide. ”
Uluhlu lwefriji yefriji yeBespoke entsha yenzelwe ukuba icingelwe ukunciphisa impembelelo yendalo esingqongileyo kunye neepaneli zayo ezinokutshintsha kunye noyilo lweemodyuli ezivumela abasebenzisi ukuba bahlaziye, endaweni yokutshintsha iifriji zabo ngokuhamba kwexesha. Ndwendwela samsung.com/vanilla-ice ngaphezulu i